प्रेमीसंग रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएकी यि युवतीलाई छोटो लुगा लगाएको भन्दै रेष्टुरेन्टवाट बाहिर निकालिदिए – Wow Sansar
December 29, 2020 103
एजेन्सी । आफ्ना प्रेमीसंग रेष्टुरेण्टमा गएकी एक युवतीलाई उनले लगाएको लुगाका कारण रेष्टुरेष्टवाट निकालिएको घटनाले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । युवतीले आफुले भोगेको घटनाका बारेमा सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा पोष्ट गरेपछि घटना चर्चित भएको हो । अस्ट्रेलियामा, एउटी युवती समुद्री किनारको रेस्टुराँवाट लुगाकै कारण निकालिनु परेको थियो ।
इटालीकी मार्टिना कोराडीले आफुले अष्ट्रेलियामा भोगेको यो घटना सार्वजनिक गरेकी हुन् । अष्ट्रेलियाको बन्डी बीच (समुन्द्र किनार) मा यो घटना घटे पछि उनलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्यो।
डेली स्टार रिपोर्टका अनुसार मार्टिनाले रेस्टुरेन्टमा ग्रे रंगको क्रप टोप र सेतो ट्राउजर लगाएकी थिइन् । उनी प्रेमीको साथमा थिइन् । जब रेस्टुरेन्टका एक युवती स्टाफ सदस्यले उनलाई उनको पोशाकको कारण रेस्टुरेन्ट छोड्न आग्रह गयरन् । फेसबुकमा पोष्ट गर्दै, मार्टिनाले लेखीन् ‘म चाहन्छु कि मानिसहरूले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखुन् । किनकी यस घटना पछि मैले धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरें, साथै म धेरै क्रोधित भएँ। हामीले यस रेस्टुरेन्टमा साइन इन गर्यौं र मेरो प्रेमी र मैले सिट लिएँका थियौं ।
Prevभतिजाको बयान: ‘काकीले भन्दै हिंड्न थालेपछि सकिदिएको हुँ’
Nextआफ्नो वर्षभरी लगाएर गरेकाे उखुकाे भुक्तानी माग्न आएका उखु किसानको काठमाडौंमा मृ,त्यु
काठमाण्डौमा केही बेर अगाडि बस दुर्घटना
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6764)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3341)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1341)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1127)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (692)
होटेल रुद्रमा प्रहरीले छापा मार्दा हाई प्रोफाइल कल गर्लसहित भीआईपी भेटिएपछि… (645)